China abakhiqizi beTriphenyl Phosphite nabaphakeli | Inhlanhla
Kunguketshezi olusobala olunombala noma olukhanyayo ophuzi ukunambitheka okuncane kwephunga.
Ayincibiliki emanzini futhi inyibilike kalula kumakhemikhali awuketshezi anjengotshwala, i-ether benzene, i-acetone njll.Ingahlukanisa iphenol yamahhala uma ihlangana nomswakama futhi inokubamba kwe-ultraviolet.
2. Inombolo ye-CAS: 101-02-0
3. Imininingwane (hambisana ne-Q / 321181 ejwayelekile ZCH005-2001)
Umbala (Pt-Co): ≤50
Inkomba yokubonisa: 1.585-1.590
Iphoyinti lokuqinisa ° C: 19-24
I-oxide (Cl- %): ≤0.20
1) Imboni ye-PVC: ikhebula, amawindi nomnyango, ishidi, ishidi lokuhlobisa, ulwelwesi lwezolimo, ulwelwesi phansi njll.
2) Enye imboni yezinto zokwenziwa: isetshenziswa njenge-light-heat stabilizer noma i-oxide-heat stabilizer.
3) Enye imboni: uketshezi oluyinkimbinkimbi ne-ointment compound stabilizer njll.
igcwele isigubhu sensimbi esihlanganisiwe esinesisindo senetha esingu-200-220kg
1. Ikhwalithi yokuqala
Imikhiqizo yethu ihlangabezana nezinga eliphephile le-MSDS futhi sine-ISO nezinye izitifiketi ngakho-ke i-yan ingathola imikhiqizo esezingeni eliphakeme enkampanini yethu. Sisungule izitshalo ezine ze-OEM eLiaoning, Jiangsu, Tianjin, esifundazweni saseHebei naseGuangdong. Umbukiso omuhle kakhulu wefektri nomugqa wokukhiqiza usenza sifanise ukufunwa kwawo wonke amakhasimende. Onke amafemu ahambisana ngokuqinile nemithetho emisha yezemvelo, ukuphepha kanye nezabasebenzi evikela ukutholakala kwethu okusimeme. Sivele siqedile i-EU REACH, Korea K-REACH ukubhaliswa okugcwele kanye ne-Turkey KKDIK pre-registration yemikhiqizo yethu emikhulu. Sineqembu lokuphatha lochwepheshe kanye nochwepheshe abanokuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwengu-10 emkhakheni wamakhemikhali amahle wokuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono zobuchwepheshe.
2. Intengo engcono
Siyinkampani okuyiyo ehlangene yezohwebo nezimboni ngakho-ke sihlinzeka ngentengo yokuncintisana nekhwalithi ephezulu yomkhiqizo.Umthamo wethu wokukhiqiza wonyaka ungaphezu kwama-20,000tons. I-70% yamandla ethu ithumela emhlabeni wonke e-Asia, eYurophu, eNyakatho Melika, eMiddle East, S. America njll. Inani lethu lonyaka lokuthekelisa lingaphezu kwama- $ 16 million.Singapakisha ngokuya ngesicelo samakhasimende.
Langaphambilini I-Dimethyl Thio toluene Diamine
Olandelayo: ICresyl Diphenyl Phosphate